Can Zimbabwe Hold Peaceful Elections? - allAfrica.com
Can Zimbabwe Hold Peaceful Elections?
President Robert Mugabe has made a call to shun violence during elections as the country celebrates 33 years of independence, as reports emerge of high levels of politically motivated violence in some rural areas and crackdowns on both the judiciary and the media.
Zimbabwe: Mugabe Marks Zimbabwean Independence as Elections Loom
Zimbabwe's President Robert Mugabe marked the 33rd anniversary of his country's independence from the UK with a call to Zimbabweans to shun violence ahead of elections expected… Read more »
Celebrations For Zimbabwe's Independence Day
Thousands have been massing in Harare to celebrate Zimbabwe's independence day. President Robert Mugabe used the occasion to make a renewed call for ... see more »
Zimbabwe's Mugabe Calls for Peaceful Elections
Zimbabwe's President says he will not tolerate foreign interference in the country's upcoming elections. Robert Mugabe was speaking at an event in ... see more »
Zimbabwe: No Zimbabwe Media Reforms, Just More Intimidation
As Zimbabwe heads to the polls later this year, media analysts and journalists are concerned about increasing crackdowns on both the judiciary and the media. Read more »
Zimbabwe: Zimbabweans 'Cry Freedom' As the Country Marks 33 Years of Self-Rule
SW Radio, 18 April 2013
Zimbabweans across the country were widely expected Thursday to take part in celebrations marking the country's 33 years of independence from white rule. Read more »
Zimbabwe: Forthcoming Polls Crucial: President
The Herald, 18 April 2013
THE forthcoming harmonised elections are crucial in determining sovereignty over the country and its natural resources, President Mugabe has said. Read more »
Zimbabwe: We Are a Truly Independent Unitary State
TODAY we celebrate 33 years of Independence at a time forces opposed to our total emancipation are ranged against us for daring to go beyond the façade of flag Independence.… Read more »
Zimbabwe: Violence Will Not Be Tolerated - Chihuri
Police will descend with full force on malcontents bent on fanning violence during the forthcoming harmonised elections, Commissioner General Augustine Chihuri has said. Read more »
Zimbabwe: Mugabe Will Not Allow Security Sector Reforms
Zimbabwe Standard, 7 April 2013
As the rhetoric and clamour for elections gathers momentum, it is convenient to warn fellow citizens of the challenges that lie ahead. The formation of the inclusive government in… Read more »
President Robert Mugabe remains unwelcome in Europe
Independence Day for Zimbabwe
April 18 is a day set aside for Zimbabweans to commemorate their liberation from the colonial regime after decades of a protracted liberation struggle. Read more »
Zimbabwe: Independence Day - What's There to Celebrate?
Zimbabwe: All Set for Independence Day Celebrations
Zimbabwe Blocks United Nations Envoy
The United Nations team, which was on a mission to assess the socio-political environment before considering election funding, has been denied entry into the country. Read more »
Zimbabwe: Tsvangirai Says No Agreement By Principals On UN Visit
Zimbabwe: Govt Cancels Poll Funding Request